Fri, Jun 22, 2018 | 07:04:20 NST
07:28 AM ( 1 year ago )
निर्वाचन आयोगले समेत मिल्दैन, हुँदैन भन्दाभन्दै सरकारले राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपालाई देखाउँदै दुई नम्बर प्रदेशको चुनाव सारेको छ । यो निर्णयसँगै असार १४ गते तोकिएको चुनाव कुनै हालतमा सम्पन्न गर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रतिबद्धतामा ठेस लागेको छ । उबेला चुनाव गराउन नसकेर राजाले असक्षम घोषणा गरेका देउवा फेरि नागरिकको नजरमा असक्षम भए भनेर सामाजिक सञ्जालमा आलोचना सुरु भैसकेको छ ।
सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले भनेजस्तै देउवा असक्षम भएकै हुन् त ? सक्षम र असक्षमको पुरै मूल्याँकन गर्ने बेला त भैसकेको छैन होला । तर तोकिएको समयमै चुनाव गर्नुपर्ने मुख्य दायित्व र जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने बाटोमा लम्केका प्रधानमन्त्री पहिलो पाइलामै असक्षम भएका पक्कै हुन् ।
सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, राजपा अझै चुनावको पक्षमा देखिएको छैन । दुई नम्बर प्रदेशको चुनाव सार्ने सहमति गर्दा पनि राजपाले तेस्रो चरणमा भाग लिन्छौं भन्ने प्रतिबद्धता जनाएको छैन । संविधान संशोधन, स्थानीय तहको संख्या थप लगायतका उसको माग कायमै छ । जुन माग तत्काल पूरा गर्न असंभव जस्तै छ ।
यति कुरा जान्दाजान्दै पनि राजपालाई देखाएर देउवा नेतृत्वको सरकारले दुई नम्बर प्रदेशको चुनाव सार्ने निर्णय गरेको छ । त्यस प्रदेशका नागरिकलाई आफूहरु अरु प्रदेश भन्दा फरक हुने भयौं भन्ने छाप बसाइदिएको छ । अरु प्रदेशमा जनप्रतिनिधि चयन भएर धमाधम विकास निर्माणको काम सुरु गर्दा दुई नम्बर प्रदेशका नागरिकको मनमा कस्तो होला ? सरकारले अलिकति पनि त्यहाँका नागरिकको सम्वेदना बुझ्न सकेन ।
एउटा कुरा सत्य हो, राजपा सहभागी नहुँदा चुनाव गराउन गाह्रो थियो । सुरक्षा चुनौति ठूलो थियो । तर गृहमन्त्री र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुले चुनाव गराउन सकिनेबारे निर्वाचन आयोगलाई ब्रिफिङ गरिसकेका थिए । निर्वाचन आयोगले सबै तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याइसकेको थियो । राजपाका केही नेता र कार्यकर्ताबाहेक दुई नम्बर प्रदेशका नागरिक चुनावको दिन पर्खेर बसेका थिए । तर यी सबै तयारी र उत्साहलाई ओझेलमा पार्नेगरी सरकारले गलत निर्णय गरेको छ ।
अरु मुख्य दलसहित तराई मधेसको एउटा बलियो शक्ति उपेन्द्र यादव संघीय समाजवादी फोरम चुनावी अभियानमै छ । चुनावबाटै तराई मधेसका नागरिकले खोजेको अधिकार पूरा हुन्छ भन्नेमा उ विश्वस्त छ । अर्को ठूलो दल विजय गच्छदार नेतृत्वको लोकतान्त्रिक फोरम पनि चुनावमै छ । चुनावपछि पनि मधेसका समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने सबैले बुझेका छन् ।
तर चुनावअघि संविधान संशोधन लगायतका माग पूरा गर्न सम्भव छैन भन्ने जान्दाजान्दै राजपा आन्दोलनमा उत्रियो । उसकै लागि वैशाख ३१ को चुनाव जेठ ३१, असार ९ हुँदै असार १४ सम्म पुर्याइयो । यति हुँदाहुँदै पनि चुनावमा आउन नखोज्नुमा धेरैले धेरैथरी आशंका गर्दै आएका हुन् । राजपा चुनाव चाहँदैन, हार्ने भएपछि उसले अनेक बहाना खोजेको हो, चुनाव टारेर देशलाई असफल बनाउन खोज्दैछ भन्ने आरोप कतै सही त होइन भनेर कुरा गर्नेहरु धेरै छन् ।
यस्तै देउवा र कांग्रेसप्रति आशंका गर्नेहरु पनि थुप्रै छन् । २ नम्वर प्रदेशमा चुनाव जित्ने संभावना नदेखिएपछि राजपालाई देखाएर देउवाले चुनाव सारेका हुन् भन्ने हल्ला पनि चलेको छ । यो हल्ला मात्रै होइन रहेछ भन्ने पुष्टि सरकार आफैंले गरेको छ ।
माघसम्म स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र गरी तीन चरणको चुनाव गर्नुपर्ने देउवा नेतृत्वको सरकारको मुख्य जिम्मेवारी हो । तर एउटै चुनाव तीन चरणमा गराउन खोजेर सरकारले बाँकी दुईवटा चुनावमा अन्योल थपिदिने काम गरेको छ । अहिले दुई नम्बर प्रदेशको चुनाव सारेर असक्षमको बाटोमा पहिलो पाइला चालेका देउवा माघसम्ममा पुरै असक्षम हुने त होइनन् भन्ने आशंका बढेको छ ।